Noresen’ny Mpilalao Football-n’ny Jamba Rosiana ny Tsy Fahampian’ny Vola Fanohanana Hahatonga Azy ho Tompondaka Eoropeana · Global Voices teny Malagasy
Noreseny ihany koa fanarahamaso manokana ny fampiasana fanafody mampatanjaka
Voadika ny 06 Septambra 2017 4:14 GMT
Mpilalao football mitampi-maso ho fiarovana sy hiantohana fa mitovy samy tsy mahita ny mpilalao rehetra. Loharano: EURO 2017 press photo, Ralf Kuckuck, BS Berlin
Ambara ho tompondaka eoropeana 2017 amin'ny football-n'ny jamba ny ekipam-pirenena rosiana tamin'ny 26 Aogositra rehefa nandresy an'i Espaina tamin'ny lalao famaranana. Teo anoloan'ny vondron'olona mientanentana tao Berlin, izay nanatontosana voalohany ny fifaninanana, tsy maintsy niditra tany amin'ny tifitifitra baolina tany anaty harato vao fantatra izay nandresy, rehefa nanao ady sahala ry zareo.
Zava-bita lehibe izany ho an'ny firenena iray izay tsy ampy ny vatsy omena ny taranja paralaimpika sy ny mpilalao rosiana rehetra, ary vao nanaovana fanaraha-maso manokana ny mpilalao paralaimpika, sady vao niharan'ny fandrarana tsy handray anjara rehefa tratran'ny fampiasana fanafody mampatanjaka.
Nanenjika isa ny ekipa rosiana tamin'ny voalohany tamin'ny isa 0-1, saingy nahatratra ny ady sahala tamin'ny alalan'ny ezaka manokana nataon'ny mpilalao iray Denis Egorov. Tafavoaka nandresy i Rosia avy eo tamin'ny isa 4-3, izay nofaranan'ny tifitr'i Andrei Tikhonov, izay voafidy ihany koa ho mpilalao mendrika indrindra nandritra ny fifaninanana.
Dikasary avy amin'ny pejim-pikambanana Vkontakte mpilalao football jamba rosiana sy n mpankasitraka. “Ry namana, adinonay ny nilaza taminareo fa voambara ho mpilalao mendrika tamin'ny fifaninanana EURO 2017 i Andrey Tikhonov — koa dia manitatra ny fiarahabantsika azy izahay!”
Nilaza ny hafaliany tamin'ny fandresena azony i Egorov tamin'ny antsafa taorian'ny lalao: “Nahafinaritra ny lalao satria goavan'ny football eoropeana i Espaina, fahafinaretana no azo afaka nifanandrina tamin'izy ireo.”
Goavan'ny lalao tokoa i Espaina, izay tompon'andraikitra voalohany tamin'ny fampandrosoana ny football jamba. Nampiantrano ny fifaninanam-pirenena voalohany io firenena io tamin'ny taona 1986, ary avy eo ny Fifaninanana Eoropeana voalohany tamin'ny taona 1997, teo ambany fanaraha-mason'ny International Blind Sports Federation (IBSA na Federasiona Iraisampirenen'ny Fanatanjahatenan'ny Jamba).
Saingy tsy io ihany no fihaonana faratampony nifanaovan'ny mpifanandrina an'i Rosia tamin'ny famaranana. Efa nahombiazana ny ekipa rosiana raha tafakatra hilalao tamin'ny Lalao Paralaimpika 2016 tao Rio de Janeiro, rehefa tafiditra faharoa tamin'ny Fiadiana ny ho Tompondaka Eoropeana 2015. Saingy nahintsana tsy hifaninana ny ekipa noho ny fandrarana azon'ny Paralaimpiana Rosiana tamin'ny fahatafintohinana vokatry ny fampiasana fanafody mampatanjaka. Ny ekipa nisolo ny toeran'izy ireo tao Brezila? Espaina.
Amin'ny ankapobeny mahazo vahana sy mihabetsaka ny mpilalao ary mihamahazo fankatoavana ny football-n'ny jamba lalaovina amin'ny futsal an'olona dimy. Raha ao Rosia kosa, misy ny fifaninanam-pirenena fanao isan-taona ary eo am-pametrahana ny programa ho an'ny mpilalao football-n'ny jamba, vao haingana indrindra natao tao Dagestan, tsy dia tsara loatra ny sary amin'ny ankapobeny ny sary, araka ny nolazain'ny mpanazatra ny ekipam-pirenena, Nikolay Beregovoy.
“Mihemotra ny football-n'ny Jamba [ao Rosia]. mihena ny isan'ny ekipa, vao mihamanjavona indrindra ry zareo”, nitaraina i Beregovoy tamin'ny taona 2016 nandritra ny antsafa nifanaovana tamin'ny R-Sport, tranonkalam-baovao sampan'ny RIA Novosti, sampan-draharaham-baovaom-panjakana rosiana. “Ny zava-dratsy indrindra dia tsy misy ny miraharaha azy – na ny RFS (Sendikàn'ny Football ao Rosia), na ny Minisiteran'ny Fanatanjahantena.”
Mailaka i Beregovoy tamin'ny fiderana ny ezaka manokana ataon'ny tsirairay mpanohana ny football-n'ny jamba, toy ny nataon'ny Talen'ny Lalao Paralaimpika, olaimpika ho an'ny marenina ary ny fanatanjahantena tsy tafiditra lalao olaimpika ao Moskoa, Dmitry Kotyrev, sy ny nataon'ny Ben'ny tanànan'i Dzerzhinsky, Vitaly Panamorenko, izay, raha nahita ny filalaovan'ny ekipa rosiana, dia nanangana fotodrafitrasa manokana hilalaovan'ny mpilalao mandritra ny ririnina, ary nanolotra fitaovana, dia ny baolina natao haneno mba ahafantaran'ny mpilalao ny toerana misy azy rehefa ilalaovana.
Ny tsy ampy eo amin'ny sehatra eny ifotony, araka ny nolazainy, dia ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa amin'ny ankapobeny sy ny vatsy ampy hanaovana izany. “Matetika dia miankina amin'ny olona iray ny zava-drehetra, izay mitondra ny ekipa hilalao, mividy ny fampitaovana sy ny zava-drehetra amin'ny volany manokana. Rehefa miala izany olona izany dia tsy misy intsony ny ekipa, dia mihatra amin'n fanatanjahantena ihany koa izany.”
“Ny anjara ampaham-bola azon'ny mpiasa iray mpitady [na mpandray] mpilalao [football] dia mety ahafahana manavotra ekipa jamba mandritra ny tapa-taona na mihoatra aza.”
Tsy mbola azo antoka raha hahasarika fahalianana kokoa ny fahombiazan'ny ekipa rosiana eo amin'ny sehatra iraisampirenena, ary ny fototra kokoa, dia ny hahasarika fanohanana ny football-n'ny jambaeo amin'ny dingana rehetra.
Na dia misy aza ny fanamby ara-bola, dia tomady ny ekipa rosiana ary azo antenaina ny hoaviny. Noho ny fandresena azony tamin'ny Fiadiana ny Tompondaka Eoropeana, dia tafakatra any amin'ny Mondialy izay hotontosaina any Madrid amin'ny herintaona ny ekipa. Efa mipetraka ny vali-bontana.
Araka ny fanehoan-kevitr'i Beregovoy ao amin'ny lahatsary fanadihadiana hivoaka atsy ho atsy, “efa betsaka izany mahazo ny Amboara Manerantany na Lalaon'ny Manam-Pahasahiranana Ara-Batana izany.” Ho an'ny firenena izay manadino amin'ny fanohanana sy amin'ny fanomezana fanararaotra amin'ny olom-pireneny manam-pahasahiranana ara-batana, misy ny fahatsiarovan-tena fa misy ny zavatra lalina kokoa mihoatra ny amboara.